Ngo-2010: Icebo lokucoca ulwelo, Yenza ubuNtu bakho, Lungiselela | Martech Zone
Sixakwe lwazi olusuka kwimidiya yoluntu, ukukhangela kunye ne-inbox. Imiqulu iyaqhubeka nokunyuka. Andinamthetho ungaphantsi kwe-100 kwibhokisi yam engenayo yokuhambisa imiyalezo kunye nezilumkiso ngokufanelekileyo. Ikhalenda yam ingqamanisa phakathi kweBlackberry, iCal, iKhalenda kaGoogle kunye Ihlathi. ndine Google Voice ukulawula iminxeba yeshishini, kunye Uyilele ukuphatha iminxeba ethe ngqo kwifowuni yam.
UJoe Hall ubhale namhlanje ukuba iinkxalabo zabucala kunye nokusetyenziswa kwe idatha ebhalwe igama lakho nguGoogle inokukhokelela ekuzitshabalaliseni. Ndiyazithanda iiposti zikaJoe kodwa andivumelani nale ngentliziyo iphela. Njengoko ndiqhubeka nokusebenzisa uGoogle, ndifuna ukuba basebenzise yonke idatha yokugqibela ukuze bandinike impendulo ehambelana ngqo nam. Andifuni ukuhamba neziphumo… ndinike impendulo endiyifunayo.
I-Twitter iya ingalawuleki… zininzi kakhulu iinkampani, oogxa, iingcali kunye neenkonzo endifuna ukuzilandela kodwa umjelo wolwazi ngoku ngumlilo. Ngombulelo, Feedera ndichonge oku njengethuba… ukuze ndihambe koku:
Uqikelelo lwam lowama-2010 kukuba iisuti zokuvelisa ezo isihluzo, nokwandisa kwaye zenzele iya kuba ngumsindo. Ukuqhubeka nokuncitshiswa kweenkampani kuya kutyhala umsebenzi ongezelelweyo kwizibonelelo ezincinci. Imveliso yethu kuya kufuneka inyuke, nokuba siyakholelwa ukuba sinamandla okanye akunjalo.
I-Facebook kunye ne-LinkedIn zikhuphele indlela yokuphila ye-Twitter yokunika ingxelo ngohlaziyo. I-Blackberry ilingisa la mava kwifowuni yam ngelizwi, i-imeyile kunye ne-facebook. Ngelixa ndiyithandayo iMac yam kwaye ndiyithanda indlela entle ngayo imbonakalo ye-iPhone, umthwalo wam uyaqhubeka ukwanda. Andifuni mhle… ndifuna imveliso. Ukusasazeka konxibelelwano kuncede ngo-2009, kodwa ngoku baphumile kulawulo kwaye ndifuna uncedo lokuzidiliza zaba ziimfonomfono ezifanelekileyo kum.
Kule veki, ndiqale ukusebenza noChaCha. Kwixesha elidlulileyo, andikhange ndiyisebenzise inkonzo yabo; Nangona kunjalo, ngoku ndongeze i-242242 kwincwadi yam yedilesi ukuze ndibhale imibuzo kwaye ndibuyise impendulo enye efanelekileyo. Sele ndonwabe kakhulu… ngelixa ndiqhuba ndinga buza idilesi, inombolo yefowuni, iiyure zokugcina, njl njl. Akunyanzelekanga ukuba ndikhangele, ndicofe, kwaye ndikhangele kwiwebhusayithi. Ndifuna impendulo… impendulo enye.
Ayindim ndedwa. Ukukhula kwemibuzo efanelekileyo, eneenkcukacha zikhula ngokukhawuleza nakuGoogle. Ndiyakholelwa ukuba umkhondo wokukhangela uza kuqhubeka kule ndlela-kunye neenkonzo zokucoca ezona ziphumo zibalulekileyo zibaluleke ngakumbi.
Ngenxa yoko, ukuqikelela kwam ngo-2010 kuya kuba sisixhobo esininzi esingathethekiyo ekuphakameni ukunceda amashishini kunye nabathengi ukucoca, ukwandisa nokwenza amava abo kwi-intanethi. Esi sesinye isiphumo kubarhwebi- oko kuthetha ukuba umyalezo wabo kufuneka ubenjalo Kaninzi efanelekileyo, ngexesha, kwaye ibalulekile… kungenjalo iya kuhluzwa.
tags: 2010ikhalendaungqamaniso lwekhalendaisihluzoizwi leGooglejoe iholonokwandisazenzeleUkubikezelaimeyile
Ufumene ntoni kwiiNjini zokuKhangela?
Ngomhla wama-12 ku-Disemba 2009 ngo-8: 52 PM
Ngomhla wama-13 ku-Disemba 2009 ngo-8: 38 AM
Ndivuma ngokupheleleyo ukuba iTwitter ngokulula ingalawuleki kwaye kukho ikamva eliqaqambileyo lezixhobo ezinje ngale kuthethwe ngayo apha.